Kuratidza zvinyorwa neelebheri Wave2Midi2Wave
Maitiro ekugadzira mimhanzi uchishandisa ekuchenjera kungwara uye muchina kudzidza
Dzidza kugadzira mimhanzi nehungwaru hwekunyepedzera! Kudzokorora neural network yekugadzirwa kwemimhanzi!
MAESTRO uye Wave2Midi2Wave dhata Mushure mekutarisa zvinyorwa izvi, ndakawana gwaro rekutsvagurudza riri kuunza dhata nyowani inonzi MAESTRO (iyo inomirira MIDI uye Audio Yakagadzirirwa Synchronous Tracks uye Sangano). Iye zvakare anogadzira iyo itsva Wave2Midi2Wave yekuvakisa, iyo inobatanidza zvitatu mamiriro-e-iyo-algorithms uye anovadzidzisa pamwe chete mune MAESTRO data faira.
MIDI inonyanya kuita hunyanzvi hwekushandisa iyo inosanganisira akawanda maprotocol emakomputa ane mhando dzakasiyana dzeidziyo odhiyo. Izvi zvinoshanda nekuti ruzivo rwunotapurwa rwunosanganisira toni, pitch, mhanyisa, uye tempo ruzivo.
Chikonzero chikuru ichi dheta diki chakakosha ndechekuti ine data rakawanda kudarika chero rapfuura dhatabhesi. Kuti uise iyo maonero, iyo MAESTRO data faira ine maawa mazana maviri nemaviri ekuraira uye MIDI zvinyorwa. Iyo MAPS data faira iine chete 172…